Huawei wuxuu ballanqaaday inuu cusboonaysiin doono taleefannadiisa labadii biloodba mar | Androidsis
Cusbooneysiinta ayaa suurtogal ah inay tahay tan ugu dhibta badan ee Android. In kasta oo muddadii laga soo gudbay, haddana waxaa soo socday qorshayaal lagu doonayo in lagu xaliyo dhibaatadan. Intaa waxaa sii dheer, noocyadu waxay bilaabayaan inay waxbadan la galaan isticmaaleyaasha. Waxa ku xiga ee sidaa sameeyaa waa Huawei. Sababta oo ah soo saaraha Shiinaha ayaa taas ballan qaaday waxay cusbooneysiin doonaan taleefannadooda labadii biloodba mar.
Waa war ka imanaya Australia, oo ah waddan ay Huawei dhibaatooyin kala kulmi karto, oo la mid ah kuwa ay shirkaddu ku noolaan lahayd Mareykanka. Marka waxay noqon doontaa waddo lagu ilaaliyo ballanqaadka iyo ujeedooyinka wanaagsan ee laga dhex adeegsadayaasha dalka jooga.
Laakiin, intaa ka sokow, waa warar ugu yaraan xiiso iyo muhiim ah. Sababtoo ah Huawei maaha mid ka mid ah noocyada sida ugu wanaagsan ula kulma marka la eego cusbooneysiinta, laakiin ballanqaadkani wuxuu noqon karaa tallaabo in si fiican loo shaqeeyo dhankiisa.
In kastoo ilaa iyo hadda Huawei ma uusan shaacin haddii cusbooneysiintan labadii biloodba mar ay u yihiin dhammaan taleefannada ku jira buugiisa., ama haddii liddi ku ah, ay yihiin qaar ka mid ah moodooyinka gaarka ah. Waxaa la filayaa in cusboonaysiintaan ay geyn doonaan balastarka amniga Google. Marka taleefannada ayaa la ilaalin lahaa wakhti kasta.
In kastoo ay tahay inaan sugno in yar si aan u ogaanno haddii ay runti noqonayso dhaqan ay ka fuliyaan adduunka oo dhan. Sidoo kale in la ogaado haddii ay tahay wax saamayn doona dhammaan taleefannada ku qoran buugga ama in kale. Sababtoo ah sumadda Shiinaha ayaa u taagan inay haysato buugga ballaaran ee taleefannada la heli karo.
Laakiin, way fiicantahay in la arko noocyadaas oo kale Huawei waxay dooneysaa inay wax badan ka qabato arrimaha cusbooneysiinta. Dhinac ka mid ah qaybta Android guud ahaan wali wax badan ayaa laga hagaajiyaa. Maaddaama adeegsadayaashu ay sugayaan muddo aad u dheer wixii cusbooneysiin ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Shirkadda Huawei ayaa cusbooneysiin doonta taleefannadooda labadii biloodba mar
MX Player video player ayaa lagu rakibay 500 milyan oo qalab